विवाह गरेको एक महिना नपुग्दै बर्दियामा २ युवाको निधन, नहरवाट निकालियो शव (भिडियो हेर्नुस्) – Sandesh Press
October 6, 2021 173
काठमाडौ । वर्दियामा विवाह गरेको एक महिना नबित्दै दुई युवकको रहस्यमय निधन भएको छ । बर्दियाको बारवर्दिया ९ बनगाइका दुई जना युवाले दिउसै पुनहरमा हा म फा’लेका थिए । उनीहरुको निधन भएको हो । भर्खरै विवाह गरेका ति युवाले लुगा नै नखोली किन नहरमा हा म फा’ले भन्ने खुलेको छैन । स्थानिय बासीन्दाका अनुसार उनीहरु पुरै लुगा लगाएका अवस्थमा थिए ।
दुवै जनाले एकैपटक खोलामा हा म फा’लेका थिए । दुवै जनाको निधन भएको हो । उनीहरुको भर्खरै विवाह भएको पनि स्थानियले बताएका छन् । स्थानियले उनीहरुको श व नहरमा फेला पारेका थिए । बबई सिचाइको नहरमा श व फेला परेको हो । दिउसो साढे २ वजे उनीहरु हा म फा’लेका हुन् । स्थानियले ३ वजे उनीहरुको श व पानी बाहिर निकालिसकेका थिए ।
उनीहरु ढलानको काममा मजदुरी गर्न गएका युवक हुन् । साइकलमा संगै आएका उनीहरुले आफुहरुले लगाएको टोपी छेउमा राखेर नहरमा हा म फा’लेका थिए । उनीहरुलाई स्थानिय बालबालिकाले देखेका थिए । स्थानियले टा उको तल र खु ट्टा माथि भएको अवस्थामा फेला पारेका हुन् । बाहिर निकालेर पनि स्थानियले उनीहरुलाई ब चा उने कोशिष गरे । पेटमा भरिएको पानी वाहिर निकाल्ने कोशिष गरेको स्थानिय एक महिलाले बताइन् ।
तर त्यतीबेला नि लो भइसकेको थियो, तर पनि हामीले कोशिष गरेका थियौं ति महिलाले भनिन् । उनीहरुले किन त्यसरी नहरमा हा म फा’ले भन्ने खुलेको छैन । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।काठमाडौ । वर्दियामा विवाह गरेको एक महिना नबित्दै दुई युवकको रहस्यमय निधन भएको छ । बर्दियाको बारवर्दिया ९ बनगाइका दुई जना युवाले दिउसै पुनहरमा हा म फा’लेका थिए । उनीहरुको निधन भएको हो । भर्खरै विवाह गरेका ति युवाले लुगा नै नखोली किन नहरमा हा म फा’ले भन्ने खुलेको छैन । स्थानिय बासीन्दाका अनुसार उनीहरु पुरै लुगा लगाएका अवस्थमा थिए ।
तर त्यतीबेला नि लो भइसकेको थियो, तर पनि हामीले कोशिष गरेका थियौं ति महिलाले भनिन् । उनीहरुले किन त्यसरी नहरमा हा म फा’ले भन्ने खुलेको छैन । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
Prevदसैँमा घर फर्कने सैनिक परिवारले नि:शुल्क गाडी र हेलिकोप्टर चढ्न पाउने !
Nextमहिनावारी भएको कति दिनमा से;क्स गर्दा गर्भ रहन्छ ? जानी राखौँ
कट्रिनाकी बहिनी इसाबेलको यो भिडियो सार्वजनिक भएपछि फ्यानहरु छक्क (भिडियो सहित)
गगन थापा माथी बानेश्वरमा mcc बि’रोध प्रदर्शनकारी द्वारा ढुङ्गा मुढा प्र’हार।